भिडियोमा हेर्नुहोस्, दोषी भए रविलाई कस्तो सजाय हुने? – दैनिक नेपाल न्युज
भिडियोमा हेर्नुहोस्, दोषी भए रविलाई कस्तो सजाय हुने?
प्रकाशित द्वारा: शुक्रबार, साउन ३१, २०७६
नेपालको चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’ को भविष्य अन्यौलमा परेको छ । कार्यक्रम संयोजक तथा प्रस्तोता रवि लामिछाने पक्राउ परेसँगै जनताको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’ को भविष्य अन्यौलमा परेको हो । आज कार्यक्रम प्रशारण हुनभन्दा अगाडी नै रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
कार्यक्रम कुरेर टेलिभिजनको सेट अगाडी बसेका रवि लामिछानेका दर्शकलाई यस कुराले पिरोलेको छ । ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका देश विदेशमा गरेर लाखौ दर्शक तथा शुभचिन्तक रहेका छन् । माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा अनुसन्धानको लागि रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
रविलाई काठमाण्डौंको पानिपोखरीमा रहेको न्युज २४ टेलिभिजनको कार्यलयबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । रविलाई नियन्त्रणमा लिन जिल्ला प्रहरी कार्यलय चितवनबाट प्रहरीको विशेष टोली काठमाण्डौं आइपुगेको हो । यहि रवि लामिछाने दोषी पाइएमा उनलाई पाँच बर्ष जेल सजाए र ५० हजार रुपैयाँ जरिवान हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
रबि लामिछाने पक्राउ पर्दा आमाछोरीको दोबाटेमा कुचो हानाहान, लियो ठूलो रुप (भिडियो हेर्नुहोस)